यसकारण पोखरमा प्याराग्लाइडिङ उडानमा रोक लगाइयो - ।। Naya Kuro ।।
२२ फाल्गुन २०७५, बुधबार ११:५८ March 6, 2019 Naya KuroLeaveaComment on यसकारण पोखरमा प्याराग्लाइडिङ उडानमा रोक लगाइयो
कास्की। व्यवसायीले प्याराग्लाइडिङ उडान गरेबापतको कर नतिरेपछि पोखरा महानगरपालिकाले आज (बुधवार) देखि प्याराग्लाइडिङ उडानमा रोक लगाउने भएको छ । महानगरले प्याराग्लाइडिङ उडान हुने क्षेत्रका वडा कार्यालयमा कर बुझाउन सम्बन्धित व्यवसायीलाई पटकपटक आग्रह गर्दै आएको थियो ।
प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले २०७२ यता महानगरलाई कर बुझाएका छैनन् । महानगरले बारम्बार ताकेता गर्दा समेत कम्पनीहरू महानगरमा दर्ता पनि भएका छैनन् । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलका अनुसार महानगरले गत पुसको १९ गते सञ्चालनमा रहेका सबै कम्पनीलाई अनिवार्य कर तिर्न आग्रह गरेर पत्राचार गरेको थियो ।
‘वडा कार्यालयले पनि अन्तिम पटक फागुनको १५ गते पत्र लेखेर २१ गतेभित्र कर नबुझाए उडान रोक्ने भनेर पत्र पठाएको छ । योअनुसार बुधवारदेखि उड्न पाउँदैनन्,’ उनले भने । महानगरको तथ्यांकअनुसार अहिले पोखरामा ४० ओटा कम्पनीले प्याराग्लाइडिङ उडान गरिरहेका छन् । नागरिक उड्ययन प्राधिकरण पोखराबाट भने ६० ओटा कम्पनीहरूले उडान अनुमति लिइसकेका छन् ।
४० कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनीले मात्र कर तिरेको पोखरा महानगरका–१८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले बताए । अहिलेसम्म माउन्टेन भ्यू प्याराग्लाइडिङले मात्र कर तिरेको छ । प्रत्येक कम्पनीले वार्षिक रूपमा पर्यटन करबापत एक लाख २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । सो रकम वडा कार्यालय वा पोखरा महानगरपालिका जहाँ बुझाए पनि हुने व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७३/७४ मा प्रत्येक कम्पनीले नेपाल सरकारलाई कर बापत जम्मा पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ मात्र बुझाउँथे । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा बढेर वार्षिक कर ५० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारले कर बढाएर पर्यटन शुल्क शीर्षकमा १ लाख २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने नीति ल्याएको हो । कर संकलनको अधिकार महानगरले वडालाई दिएको छ । अभियानबाट
को हुन नागा बाबा ? किन नांगै हिड्छन त ?
अर्काको श्रीमती प्रति किन आकर्षित हुन्छन् पुरुषहरु ? यस्तो छ रहस्य
१२ असार २०७६, बिहीबार १३:५२ June 27, 2019 Naya Kuro
पत्याउनुहुन्छ ? नेपालमै भ्रष्टचार शुन्य गाउँ छ !
२४ माघ २०७५, बिहीबार १८:०० February 7, 2019 Naya Kuro
श्रीमानको भावना प्यारी श्रीमतीको लागि
२२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १३:१३ November 8, 2019 Naya Kuro
हुम्लामा भएको जीप दुर्घटनामा चार जनाको मृत्यु, सात जना घाइते
देशका पहाडी भू–भागहरूको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली
आज २० मंसिर २०७७ (Dec.05) शनिवार को राशिफल